Aas qaran oo loo sameeyey wasiirka la dilay ee warfaafinta Puntland, kana qayb galeen sadexda mas?uul ee ugu sarreeya dawladda Puntland.
Galkacyo, Aug 06- Alle ha u naxariistee waxaa maanta aas qaran oo aad u baallaran loo sameeyey wasiirkii warfaafinta dawladda Puntland Warsame Cabdi Shirwac ?Seefta Bannaank? kaasi oo koox dabley ahi shalay galinkii hore ku dhax toogteen gudaha magaalada Galkacyo, waxaana aaskaasi uu ka dhacay Qabuuraha ku yaalla duleedka Galkacyo.
Alle ha u naxariistee aaska wasiirkii warfaafinta ee dawladda Puntland, waxaa ka soo qayb galay m/weynaha dawladda Puntlaand Dr C/rixmaan Maxamed Maxamuud Faroole, Kuxigeenkiisa Cabdisamad Cali Shire, Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland C/rashiid Maxamed Xirsi, xubno iskugu jira labada gole ee baarlamaanka iyo xukuumadda oo ay ka mid ahaayeen wasiirrada amniga, maaliyadda, caafimaadka, diinta iyo awqaafta, mas?uuliyiinta maamulka gobolka iyo kuwa degmada Galkacyo iyo dadweyne aad u tiro badan.
Boqolaal qof ayaa soo buux dhaafshay goobta uu aasku ka dhacayey dadkaasi oo iskugu jiray dhammaan bulashada qaybaheeda kala duwan, si ay goob-joog uga noqdaan halka uu ka dhacayey aasku, kuwaasi oo dhammaantood ka murugaysnaa dilka loo gaystay alle ha u naxariistee wasiirkii warfaafinta dawladda Puntland Marxuub Warsame Cabdi Shirwac.
Markii uu aasku dhacay kadib waxaa halkaasi hadal kooban ka soo jeediyey m/weynaha dawladda Dr C/rixmaan Maxamed Maxamuud (faroole) oo tacsi tiiraanyo huwan u diray dhammaan shacabka Soomaaliyeed meelkasta oo ay ku nool-yihiin isagoo uga tacsiyenayey dilkii naxdinta badnaa ee loo gaystay wasiirkii warfaafinta, waxaana m/weynuhu si gaar ah tacsi ugu gudbiyey ehelkii iyo qaraabadii uu ka tagay wasiirku.
M/weynuhu waxaa uu tilmaamay wasiirku in uu ahaa halyey Soomaaaliyeed oo karti iyo geesinimo badan lahaa, wax badanna u soo halgamay dhammaan umadda Soomaaliyeed, waxaana uu intaasi ku sii daray m/weynuhu in ay saaxiibo isku dhow ahaayeen isaga iyo Seeftu.
Shacabka magaalada Galkacyo iyo guud ahaanba kuwa gobolka Mudug waxaa uu m/weynuhu u soo jeediyey in ay awoodda saaran sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa raggii ka danbeeyey dilkii wasiirka, isla markaana ay dawladda garab buuxa ku siiyaan soo qabashada raggaasi, isagoo ehelkii wasiirka ugu baaqay in ay dulqaadtaan inta gacanta lagu dhigayi nimankii falkaasi gaystay.
M/weyne Faroole, waxaa uu xusay dawladdu in ay dadaal dheeraad ah ku bixin doonto sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa raggii ka danbeeyey dilkii wasiirka, waxaana magaalada Galkacyo illaa xalay si xowli ah ugu soo dhurmayey ciidamada ammaanka ee dawladda Puntland kuwaasi oo ka kala imaanayey gobollada kala duwan ee Puntland si ay gacan uga gaysteen arrimaha ammaanka gobolka illaa iyo haatanna gacan laguma dhigin raggii dilkaasi gaystay.
M/weynaha Puntland ayaa soo gaaray gudaha magaalada Galkacyo duhurkii maanta isagoo ay galbinayaan ciidamo aad u tiro badan oo ah kuwa u xilsaaran illaalinta amniga madaxda dawladda, waxaana waftisgiisa ka mid ahaa m/weyne kuxigeenkiisa, guddoomiyaha baarlamaanka, iyo xubno badan oo iskugu jira labad gole ee xukuumadda iyo baarlamaanka.
Horay magaalada Galkacyo waxaa ugu sugnaa wafti heer xukuumadeed iyo mid baarlamaanba iskugu jira, kuwaasi oo uu ka mid ahaa wasiirkii la dilay Marxuum Warsame Cabdi Shirwac, waxaana ujeedada halkaan ay u yimaadeen ay ahayd sidii ay u aruurin lahaayeen xog ballaaran oo ku aaddan arrimaha gobolka oo in muddo ahba ay ka taagnayd amni xumo baahsan iyo itaal darro maamul.
Intii waftiga m/weynuhu ay ku soo jeedeen magaalada Galkacyo waxaa ka qallimmay mid ka mid ah gaadiidkii ciidanku ay saarnaayeen, waxaana shilkaasi ku geeriyooday labo ka mid ah ciidanka dawladda waxaana ku dhaawacmay 11 kale oo qaar ka mid ah xaaladooda caafimaad ay aad u liidato.
Dhanka kalena qabuuraha magaalada Garoowe ee xarunta dawladda Puntland waxaa saakay lagu aasay tliyihii ciidanka bileyska Puntland Muuse Axmed Saalax, oo xalay ku geeriyooday gurigiisa.